Imikhiqizo yemvelo yindlela ephilile yezimiso zesimanje
Ngokuvamile, imbangela yezifo zenhliziyo isisindo esiphakeme se-triglycerides noma i-cholesterol egazini. Ukuvimbela ingozi yezifo ezinjalo, izidakamizwa zemithi yesigungu se-statin. Izinto ezikuleli qembu zisiza ukuqeda okuqukethwe okukhulu kwe-cholesterol egazini, futhi kunciphise inani lamapoprotein aphansi emzimbeni womuntu. Iqiniso liwukuthi ama-statins anethonya kuma-enzyme avumela isibindi ukuba sikhiqize i-cholesterol. Izitatimende ziyi-inhibitors ye-hydroxymethylglutaryl coenzyme A-reductase. Iminyaka eminingana, ama-statins awazange anconywe ukusetshenziswa ngenxa yemiphumela emibi engase ivele.
Kubantu abaningi abanesifo senhliziyo noma abanamazinga aphezulu e-cholesterol, izitembu zenza imiphumela emibi. Iziguli ezinjalo zizama ukungasebenzisi izidakamizwa nge-statin content, kodwa ukhetha ukuzifaka esikhundleni semikhiqizo yokudla equkethe isimiso semvelo. Mayelana nabo futhi ukhulume ku-athikili "Imikhiqizo yemvelo - okunye okunempilo ku-statins."
Imiphumela emibi yesimiso.
Izitatimende, noma kunalokho ezinye zazo, zingabangela imiphumela emibi ngezinga eliphakeme. Imiphumela ibuye ixhomeke esimweni sesimiso somzimba sokuzivikela komzimba, ngohlobo kanye nomthamo wezidakamizwa.
Imiphumela ingaba kanje:
Ukusetshenziswa kwesikhathi eside kwezitho zomzimba kungabangela izifo ze-muscle, njenge-myopathy. Ukwandisa i-enzyme ye creatine kinase kuholela ekwandeni kobuzwe bemisipha. Kwezinye izimo, i-myopathy ingaholela ku-rhabdomyolysis. Lesi sifo sihambisana nokubhujiswa kwezicubu zomzimba, okuholela ekukhululweni kwemiprotheni ye-myoglobin, futhi lokhu kubangela ukulimala okungenakuguquka kwezinso. Ezimweni eziningi, imiphumela iyingozi. Ukuzizwa njalo kokukhathala nokukhathala, kanye nomchamo omnyama noma obomvu - izimpawu zokuqala ze-rhabdomyolysis.
Ukulahlekelwa kwememori nokulala.
Ubuthakathaka bemisipha, eholela ekutheni i-neuropathy ehambisana no-numbness noma ukuzwa okuncane kwezingxenyeni, kungaholela emiphumeleni engathandeki eholela ekukhubazeni. Konke lokhu kungatholakala uma ngaleso sikhathi ungahambi kudokotela bese uqala ukwelashwa.
Ukushintsha kwemizwa njalo.
Uma uthatha ama-statins futhi okungenani unesinye salezi zimpawu, kufanele usheshe uthintane nodokotela.
Okunye okungokwemvelo kuya kwesimiso.
Esikhathini esithile esidlule, ososayensi baqaphela ukuthi i- vitamin C , noma ngaphezulu, ukungabi khona kwayo kwandisa ingozi yesifo somuntu ngezifo zenhliziyo. I-Vitamin C iqukethe inani elikhulu le-ascorbic acid, eliyisimiso esisebenzayo. Ngokukhiqizwa ngokweqile kwe-cholesterol, i-lipoprotein ephansi kakhulu, i-ascorbic acid iyasebenza njengesivimbela. Izithelo ze-Citrus ezinhlotsheni ezintsha ziwumthombo we-vitamin C. Izithako zokudla okunempilo eziqukethe i-vitamin C zizokuvumela ukuba uthole umthamo odingekayo walokhu kutholakala ezimweni ezibucayi.
I-vitamin B3 (niacin) engenawo amanzi emanzini itholakala ku okusanhlamvu, inyama, imifino nobisi. Lesi sici yisimiso esinamandla kakhulu semvelaphi yemvelo. I-Vitamin B3 igqugquzela ukukhiqizwa kwama-lipoprotein aphezulu, ngaleyo ndlela iqondise izinga le-cholesterol egazini.
Izitembu eziyimpumelelo zomsuka wemvelo zingamanye amakhambi. Phakathi kwabo kukhona:
I-garlic , naphezu kokunambitheka okubukhali nokuphunga, ukusetshenziswa kwayo njalo ekudleni kuyasiza ekwenzeni okujwayelekile kwe-cholesterol. I-garlic ivimbela ukwakheka nokuthuthukiswa kwamapoprotein aphansi kakhulu futhi kunciphisa kakhulu inani le-cholesterol ezitsheni. Le statin inamandla kangangokuba emva kwamasonto amane kuya kwesishiyagalolunye kwesicelo sayo umphumela omuhle uyabonakala.
I-Kimmifora mucul (i-guggul, noma i-myrgy yase-Arabia) iyimthombo yokuphulukisa i-resin, ukusetshenziswa okukuvumela ukuthi ugcine izinga elidingekayo lama-lipoprotein aphakeme futhi aphansi, futhi kusiza ukwehlisa i-cholesterol. Lokhu okunye okunempilo kudayiswa ngesimo samaphilisi noma ngendlela yamathebulethi.
I-Curcumin (i-Canadian-root root) ikuvumela ukuba uxazulule izinkinga eziningi ezihambisana nezifo zesimiso senhliziyo. Futhi, ukusetshenziswa okuvamile kwalesi sakhiwo esinamandla nesincane esingaziwa kuzokwehlisa izinga le-cholesterol egazini, ngoba lesi sidakamizwa sizosiza isibindi ukuba sisebenze inani elidingekayo le-cholesterol.
Ukudla okunempilo. Ukunciphisa izinga le-cholesterol kukhuthazwa ukusetshenziswa okuvamile kwezitshalo (ibhali, oats), kanye nemifino enobuthi, izithelo namajikijolo (izaqathe, ubhontshisi, ama-avocade, ama-apula, njll). Kulokhu, ukudla okungokwemvelo kuzothatha i-cholesterol eyengeziwe emathunjini, ukuvimbela ukujikeleza kwayo nokuqina kwegazi. Izimfanelo zemikhiqizo enjalo zenza zifane nezimo zemvelo.
Amafutha aqoshiwe kanye nenhlanzi yizici zemvelo eziphumelelayo ngenxa yokuqukethwe kwama-omega-3 ama-acids ama-acids kuwo, okwenza kube khona ukulawula ukukhiqizwa kwe-lipids. Ukusetshenziswa njalo kwamafutha enhlanzi kusiza ukwehlisa izinga le-triglycerides ne-cholesterol egazini. Kufaka phakathi i-saumon yakho ye-fatty menu, i-mackerel nezinye izinhlanzi, uzothola inani elidingekayo lamafutha enhlanzi.
Ngasekuqaleni kwe-Asia, ekulungiseleleni izitsha eziningi njengama-dyes nama-flavour, umkhiqizo wokuvuthwa welayisi obomvu wawusetshenziswa kabanzi. Kamuva, ososayensi bathola ukuthi ukukhiqizwa komkhiqizo wokukhiqiza - i- monocalin K , kusiza ukwehlisa izinga le-triglycerides ne-cholesterol egazini. Kufanele kuqaphele ukuthi kwamanye amazwe ukudayiswa komuthi onjalo kungavunyelwe.
I-Polycenanol iyi-statin yemvelo enamandla kakhulu, eyaziwa kakhulu. Umoba ushukela ngumthombo walesi simiso semvelo. I-Polycazanol ikhiqizwa ngama-capsules. Ngenxa yezimfanelo zayo, i-polycenanol iyasiza ukulawula ukucindezeleka kwegazi, ukunciphisa izinga le-lipoprotein elincane, livimbela ukwakheka kwegazi, futhi kusiza ukulawula isisindo sokukhuluphala.
Imikhiqizo ye-soy fermentation (tofu, miso kanye ne-tempe) iqhaza ekunciphiseni kwe-cholesterol, evumela ukuba benze njengezimiso zemvelo.
Ukuhlanza umzimba emva kwamaholide
Izakhiwo eziwusizo ze-arugula
Ukudla okwelashwa nge-psoriasis
Khipha usuku ngosuku ngama-apula
Lapho udinga ukudla imifino eluhlaza nezithelo
Ukulayishwa ngosuku ngosuku lwe-oatmeal
Izakhiwo zokwelapha ze-currant ebomvu
Ukukhulelwa: i-fetus encane
Ungancibilikisa kanjani ushokoledi ekhaya
I-Horoscope ngo-December 2017 - owesifazane-iTaurus - kusukela kuTamara Globa no-Angela Pearl
Utamatisi sauce no-tomato unamathisele
Uyazi kanjani ukuthi umshado wakho unomsoco?
Indlela i-Linseed Oil ethinta ngayo ukunciphisa
Iphunga jam nge-orange
I-Cannelloni ngenyama enobuthi
Indlela yokukhetha i-air conditioner
Izihlahla kanye namaski wokunakekelwa kwesikhumba ekhaya
URobert Patison: ukuphila emva kwe "Twilight"
Feijoa nge-cranberries ushukela
Kusho izimonyo zokuhlobisa
Ukwenza ukukhanya kwansuku zonke ukukhanya
I-French pie kishe nge-broccoli kanye noshizi